यो टोली फागुन २ मा ढाका र फागुन २४ मा कलकत्ता पुगेपछि केही दिन त्यही घुम्नको लागी रोकियो । जगन्नाथ पुरीमा जंगबहादुरले ५००० रूपैंया मन्दिरलाई दान गरेका थिए । आजको रकममा परिवर्तन गर्ने हो भने यो करोडौ रूपैंया हुन आँउछ ।
चैत्र २७ गते बेलायतको लागी पानीजहाजमा यात्रा आरम्भ भयो । ५००० पाउण्ड रकममा भाडामा लिएको P & O Company को Haddington Steamer मा जंगबहादुरको यात्रा आरम्भ भए पछि बाह्र सय सैनिकले बिदाइ गर्दा सबै सैनिकहरू धेरै समयसम्म रूदैं समुन्द्र हेर्दै बसेका थिए । उनिहरूको सोचाइमा समुन्द्री यात्रा डरलाग्दो हुन्छ तसर्थ महाराजा अब कहिल्यै फर्केर आउने छैनन् ।
मद्रास, सिलोन (श्रीलंका), एडेन (यमन), स्वेज (इजिप्ट), काइरो (इजिप्ट), एलेक्जेन्ड्रिया, जिब्राल्टर हुँदै जेठ १४, १९०७ मा बेलायतको दक्षिण Southampton Harbour मा करिब साढे चार महिना पछि बल्ल पुग्न सफल भए ।
सबैको मान्यता जंगबहादुर यूरोप पुग्ने पहिलो नेपाली थिए । तर जंगबहादुर लण्डन पुगेको दुइ दिनमा नै सडकमा घुम्दै गर्दा अचानक सडकमा कुचो लगाएर माग्दै गरेको नेपाली माथी जंगबहादुरको आँखा पुग्यो । उनले बोलाएर सबैकुरा सोधे । त्यसपछि कहिले कसरी बेलायत पुगेको सबै सविस्तारमा वर्णन गरे उनले ।
उसको नाम मोतीलाल सिंह थियो, भक्तपुरमा जन्मेका सिंह १९ बर्षको उमेरमा अंग्रेज नेपाल युद्धमा घाइते भएकामा उनलाई अंग्रेज सेनाले कब्जामा लिएका थिए । उसको बहादुरीबाट खुशी भएका अंग्रेज सैनिक अधिकारीले उनलाई वि.सं . १८७१ मा गठन भएको 1st Gurkha Rifle मा सैनिकको रूपमा भर्ति गराइदिए । अंग्रेजी बाेल्न सिकेका उनले पछि कलकत्तामा विवाह गरेर बालबच्चा पनि भयो । यसरी खुशीसाथ बसेको उसलाई एक दिन एक ब्रिटिस क्याप्टेनले बेलायत जाने सपना देखाए । उनी क्याप्टेनको साथ वि.सं. १९०० तिर लण्डन पुगे । केही दिनमा भएको पैसा पनि चोरी भयो र लण्डनको सडकमा बेवारिसे भए । मागेर खाने र St. Paul चर्चमा बस्ने तथा कुचो लगाउने काम गर्न थाले ।
१९०७ जेठ १६ मा जंगबहादुरको नजर परेपछि जंगबहादुरले उनलाई उसको दुःखद परिस्थितिबाट मात्र मुक्त गरेनन् । उनलाई आफ्नो यात्रा भरी दोभाषेको रूपमा साथ राखे । आफू जहाँजहाँ गए सबै ठाँउमा सम्मान साथ उसलाई लिएर गए । मोतिलाल सिंहले जंगबहादुरलाई महत्वपूर्ण ठाउँ मात्र घुमाएनन् त्यहाँको सविस्तार वर्णन पनि गरे । बेलायत यात्रा सकिएपछि जंगबहादुरका साथ उनी पेरिस पुगे। तर जंगबहादुर नेपाल फर्कंदा मोतिलाल फर्कन मानेनन् ।